Spotify inosvika 158 mamirioni kubhadhara vanyoreri | Ndinobva mac
Munguva yekutanga kota ya2020, Yese yakabhadharwa vanyoreri kuSpotify yakakura kusvika pamamiriyoni gumi nemashanu, inova 21% kudarika panguva imwechete yegore rapfuura. Zvisinei, inoyambira pamusoro pekusava nechokwadi kwekuwedzera kwayo mune ramangwana munyika dzakaita seIndia, imwe yemisika yekupedzisira yasvika uye kwavari kusangana nekuwedzera kwezviitiko zveCOVID-19, saka havagone kufanotaura kuti zvichave zvakaita sei. mumwedzi inotevera.
Avhareji yemari pamushandisi yakadonha 7% gore-ne-gore ku4,12 euros. Iyo kambani inoratidzira kudzikira kwemitengo yakaderera mumisika mitsva uye zvirongwa zvakadzikiswa zvakagadzirirwa kukwezva vanyoreri vatsva, chimwe chinhu icho chichagadzirisa mumwedzi inotevera. nechiziviso chekuwedzera kwequotas mune dzimwe nyika dzeEurope.
Yakazara Spotify Kunyorera Revenue ivo vakawedzera ne14%, kusvika 1.930 mamirioni euros. Kushandiswa kwemumwe mushandisi kwakakura mumatunhu akavandudzwa apo nzvimbo dzichiri kusimukira "dzakaratidza zviratidzo zvekuvandudza, asi dzakaramba dziri pazasi pre-COVID nhanho."
Kunyangwe Apple Music iri yechipiri inonyanya kufarirwa mumhanzi kushambadzira sevhisi mushure meSpotify, kana zvirinani inofanirwa kunge iri kana huwandu hwekukura hwakafanotaurwa nevamwe vaongorori vakasimbiswa izvozvo Vanotarisa vangangoita mamirioni makumi manomwe vanyori nhasi.
Inofanira kuyeukwa kuti kubvira Chikunguru 2019, apo Apple yakazivisa izvozvo yakanga yasvika kunyoresa mamirioni zana, kambani haina kutaura nezvenyaya iyi zvakare.
Amazon, pachikamu chayo, yakaziviswa mukutanga 2020, kusanganisa zvese zviitwa zvinopihwa nemumhanzi (kunyoreswa pasina kushambadzira, kutamba nezviziviso uye Amazon Prime Music) mukutenderera, yakanga ine mamirioni makumi matanhatu evashandisi nhamba inofanirwa kunge yakawedzera mugore rekupedzisira kunyangwe kambani yaJeff Bezos isina kuvandudza nhamba iyoyo zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Spotify inosvika mamirioni makumi mana vanobhadhara
Sonos Roam, mutauri anotakurika uyo asingatenderi pamhando yezwi uye simba
Iyo nyowani Apple TV 4K, iMac uye iPad Pro inowanikwa mukupera kwaMay